कसरी बनाउने त कालो ओठको रंग प्राकृतिक रंग जस्तै गुलाफी ?? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कसरी बनाउने त कालो ओठको रंग प्राकृतिक रंग जस्तै गुलाफी ??
महिलाहरु सुन्दर देखिन बजारमा पाइने विभिन्न कस्मेटिक सामानको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जस मध्ये लिपिस्टिक पनि एक हो।महिलाहरुले आफूलाई राम्रो देखाउन विभिन्न रंगका लिपिस्टिकहरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर आफूले सोचे जस्तो लिपिस्टिकको रंग ओठमा फरक देखिन्छ। जसका कारण कहिलेकाहीँ मनमा खिन्न लाग्छ।
जसरी हामी अनुहारको स्याहार गछौं, त्यसरी नै ओठको पनि स्याहार गर्न जरुरी छ। हावाहुरी, धुलो धुँवा र गर्मीले ओठ कालो हुने गर्छ। जसले गर्दा हाम्रो ओठको प्राकृतिक रंग हराएर जान्छ। कम गुणस्तरीय लिपिस्टिकले पनि ओठ कालो हुने गरेको पाइन्छ।
कालो ओठलाई पुनः प्राकृतिक रंग जस्तै बनाउन समय लाग्छ। तर असम्भव भने छैन।कसरी बनाउने त कालो ओठको रंग प्राकृतिक रंग जस्तै ?-चुकन्दरका विभिन्न फाइदाहरु छन्। जसमध्ये ओठलाई गुलाबी बनाउने फाइदा पनि एक हो। चुकन्दरमा भिटामिन सी पनि पाइन्छ। जसले किलिजिङको पनि काम गर्छ।-सबैभन्दा पहिले एउटा चुकन्दर लिने र त्यसलाई सफासँग धुने । बाहिरको बोक्रा फाल्ने।
अबस्य पढेर नाग देवताको दर्शन गरि ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस्
घर स्वर्ग बनाउन यी राशिका युवतीलाई बुहारी बनाउँनुहोस्
दही खाँदा के हुन्छ?यसो भन्छन डाक्टर
अण्डा किन फ्रिजमा राख्न हुदैन कारण यस्तो छ